Izinkinga Eziyisikhombisa Zokuxakaniseka Nezohwebo Zomphakathi Martech Zone
Izinkinga Eziyisikhombisa Zokuxakaniseka Nezohwebo Zomphakathi
NgoMsombuluko, Ephreli 3, 2017 UKevin North
Ukuhweba kwezenhlalo sekuyigama elikhulu, nokho abathengi abaningi nabathengisi abaningi bazibambezela “ekuzijabuliseni nabantu” ngokuthenga nokuthengisa kwabo. Kungani kunjalo?
Ngezizathu eziningi ezifanayo kuthathe iminyaka eminingi ukuthi i-e-commerce incintisane ngokuqinile nokudayiswa kwezitini nodaka. Ukuhwebelana kwezenhlalo kuyisimo semvelo esingavuthiwe nomqondo, futhi kuzothatha nje isikhathi ukuthi iphonsele inselelo indawo esebenza kahle egcotshwe nge-e-commerce namuhla.
Izingqinamba ziningi, futhi amandla okuxoxwa angahlelekile makhulu, kepha ezingeni lesithombe esikhulu, nazi izizathu eziyisithupha ezibalulekile zokuthi ezentengiselwano yezenhlalo azenzeki ngendlela enkulu okwamanje:
Kukhona izingxabano mayelana nokuthi yini ukuhweba kwezenhlalo. Ingabe kunjalo I-Facebook Marketplace? Ingabe izinhlelo zokusebenza ezifana Okunikezwayo futhi Yekela, okubonakala njengokuphonswa nje kwetshe kusuka Craigslist? Ngabe okubhaliselwe okunemiphakathi esebenzayo kuvuliwe I-CrateJoy? Ingabe ukukhangisa nje ukuphinda kuqondiswe kumanethiwekhi omphakathi? Ingabe ukwabelana ngeyakho EBay ukufakwa kuhlu kokuphakelwa kwakho kwezokuxhumana? Ngaphambi kokuthi ezentengiselwano zomphakathi zisuke, zidinga ukwakha isikhungo samandla adonsela phansi. I-Amazon ne-eBay yileso sikhungo ku-e-commerce. Akukho lutho olufanayo okwamanje kwezentengiso yomphakathi.
Abathengi empeleni abayifuni. Abathengi abangaphezu kwamaphesenti angama-50 be-e-commerce abadumile baphendukela e-Amazon kuqala lapho bethenga online. Ungabheja ukuthi i-eBay ithatha esinye isinqamu esikhulu salokho kunakwa. Mangaki ama-eyeballs athola ukuhweba komphakathi? Ungabheja ukuthi akusona cishe isigamu sezigidigidi i-eBay ne-Amazon bebika ndawonye njengezisekelo zabathengi abasebenzayo.
Okuhlangenwe nakho kokuthenga — nokukhethwa — kubi kakhulu. Njenge-shopper, uma unama-akhawunti eBay ne-Amazon.com, ungathenga cishe noma yini ethengiswa noma kuphi emhlabeni. Kwezentengiselwano yezenhlalo, ukukhethwa komkhiqizo nabathengisi kusenomkhawulo, futhi kufanele wenze konke okusemandleni akho ukubathola, unqamula amasayithi amaningi nezindawo. Kuyinkinga yenkukhu neqanda: imikhiqizo embalwa isho abathengi abambalwa kanye nokuhamba okuncane - okusho ukuthi bambalwa abathengisi-okudla inkinga. Njengamanje, abathengisi abaningi bakhetha ukuthengisa lapho iningi labathengi bakhona, okusho ukuthi lapho iningi lemikhiqizo yangempela ikhona, futhi.
Abathengi abakwazi ukwenza ukuhwebelana kwezenhlalo ngaphandle kokucabanga. I-E-commerce inenqubo yokuthengisa kanye nokuguqula inqubo kuze kube yisayensi. I-Amazon Prime mhlawumbe iyisibonelo esihle kakhulu lapha, kepha i-eBay ithathe amagxathu amakhulu eminyakeni yamuva futhi. Abathengi bangathenga izinto ezinkulu ezimakethe ngokuthanda, ngaphandle kokuxabana — kepha intaba ukuze bakhuphuke ukuze bathole umkhiqizo, baqonde inqubo yokuthengiselana, futhi baqedele ukuthengiselana kwezentengiselwano yomphakathi kwehle kakhulu futhi akubikezeli. Lokho kusho ukuthi amanani okuguqula aphansi avela kubathengisi — asuka echibini elincane kakhulu elithengayo
Izinkinga zokuthengiselana zivele kalula. Ku-eBay noma e-Amazon, yonke imininingwane yokugcina yokuthengiselana — ukuhlolwa kwabathengisi ngabathengi, ukuqinisekiswa kwe-oda, ukulandelwa kokugcwaliseka, ukubuyiselwa nokushintshaniswa, izingxabano nokulungiswa kwezingxabano — kusingathwa kahle futhi kusuka endaweni eyodwa, emaphakathi engaphathwa ngezimbalwa nje ukuchofoza. Abanikazi abaningi bewebhusayithi abazimele nabo ngokufanayo batshale izithukuthuku namadola ukuzama ukuncintisana nalesi silinganiso sepholishi, futhi ngesizathu esizwakalayo — iheha abathengi njengebhizinisi lamuntu. Kwezentengiselwano yezenhlalo, imithetho yasentshonalanga yasendle isasebenza, njengoba yenzile ku-eBay ngo-1999. Kubathengi nabathengisi abaningi ngokufanayo, leli akulona ithemba elikhangayo.
Ukukhathazeka kwangasese kunzima ukunqoba. Ukukhathazeka ngobumfihlo kubathengi abaningi kuyanda eminyakeni yamuva, futhi akubalahlekelanga social imvamisa ifushane ye iqoqa idatha yami bese iyisebenzisela inzuzo. Kubathengi abaningi, ezentengiso yenhlalo kuzwakala kakhulu ngathi ubumfihlo obuncane, ingozi enkulu. Kuzothatha isikhathi, ingqalasizinda, ukuziphendukela kwemvelo, nokwaziswa ukuze lezi zinto ezikhathazayo zitholwe. Okwamanje, abathengisi abacabanga ukuthi bazothinta amazinga wokuguqulwa kungenzeka balungile.
Ukuthenga kuhlala kungumsebenzi ohlukile. Lokhu kungazwakala kuyinto esobala ongayisho, kepha abasebenzisi abaningi bezindaba zenhlalo abakulungele ukuxuba ukuzijabulisa nokuthenga. Abakaze bakwenze phambilini, futhi ayikho imithetho noma imikhuba ekhona yokushayela abasebenzisi bezinkundla zokuxhumana ukuthi bacabange ngokuthenga njengoba bezijabulisa — noma okuphambene nalokho. Abathengi bamane abakabi nayo i- social mindset lapho uthenga noma a shopping mindset lapho sihlangana. Kuzothatha iminyaka ngaphambi kokuba bakhe le nhlangano.
Uma ungumthengisi ozibuza ukuthi wena noma cha kufanele be kwezebhizinisi lomphakathi, ungesabi. Ngenxa yalezi zizathu, kungenzeka awuphuthelwa okuningi okwamanje. Noma, ukubeka ngenye indlela, ungahle uthole okungenani okuningi ngokuphinda kabili uphinde ucwengeke imizamo yakho ezimakethe ezinkulu, lapho iningi labathengi likhona, nalapho ukuphepha nokuqagela komthengi nomthengisi ngokufanayo kuphakeme kakhulu.
Ngakho-ke kubathengisi abaningi, umqondo omuhle okwamanje ukwenza lokho okwenzayo noma kunjalo — ukwanelisa amakhasimende, ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezinhle, ukukhulisa ibhizinisi lakho ngamasu - nokusebenzisa noma yimiphi imikhuba emisha noma ukukhomba noma yiziphi izimakethe ezintsha ngaphakathi kwalolo hlaka. Okunye kuzozinakekela.
Tags: AmazonCraigslistcratejoyeBayfacebook emaketheyekelaukunikelaezentengiso yenhlaloizinkinga zokuhweba zomphakathi
UKevin North unguMongameli kanye ne-CEO ye I-Terapeak, lapho enesibopho sombono wenkampani, amasu, ukukhula kwemali engenayo nokusebenza kwebhizinisi.
Yiziphi izinto ezisezingeni eliphezulu ze-SEO ku-2017?
Nawa Ama-Podcast Wokumaketha Womphakathi Wethu